Bonke entsha England, ngaphandle KP - adore Cricket
2 Bonke entsha England, ngaphandle KP
Kushicilelwe 4th Februwari 2014 by Jon Scaife & wafaka ngaphansi Test Cricket.
Ezindabeni ezinkulu kakhulu zekhilikithi zosuku i-England isimemezele ukuthi uKevin Pieterson ngeke asaba khona ezinhlelweni zabo, ngokuhlakaza ngempumelelo amalulwane abo aholayo. Lokhu sekungishukumisele ekugcineni ukuthi ngibhale i-athikili yami yokuqala selokhu uchungechunge oluyingozi lomlotha lwaqala cishe 2 izinyanga ezedlulile. Ngithanda ukukunikeza umfundi okhipha isexwayiso, ukuthi kanzima njengoba ngizama ukuhlala nginethemba mayelana nomdlalo omkhulu kunezinsuku ezithile lapho lokho okudinga ukushiwo kungazizwa kukuhle impela. Lokhu kungenye yazo…
Ngifisa ukwethula icala kini, icala lokuthi emazingeni aphezulu ekhilikithi yesiNgisi kuye kwaba nochungechunge lokwehluleka okukhulu, nokuthi lokhu kwehluleka okukhombisa ukuthi alulungiswa. Ngizobuye ngiveze enye indlela yami yokuma kwesimo manje.
1. Ukwehluleka ukuphatha i-KP
I-KP ibe ngumdlali wekhilikithi ophumelele kakhulu e-England. Ungumdlali ojabulisa kakhulu isixuku. Umuntu ongashintsha ngokuphelele umdlalo ne-bat. Akukabikho abaningi abanjengaye, futhi ngeke uphinde ube njengaye futhi. Kodwa-ke unazo izindaba zakhe, futhi lezi zidinga ngokucophelela, ukuphathwa okucabangayo nokwakhayo. Ngesikhathi uMichael Vaughan engukaputeni kwakungekho zinkinga zomphakathi ezifanayo ne-KP, futhi uma uzwa uMichael Vaughan ekhuluma nge-KP kulula ukusho ukuthi kungani. Ngokucacile uVaughan ungumuntu onamakhono wokuphatha abantu ngokuhlaba umxhwele. I-ECB kufanele ngabe iqinisekisile, ngemuva kwe-KP débâcle yokuqala (ngenkathi edonswa phansi njengoKaputeni), ukuthi babenomuntu endaweni angamphatha. Njengoba ngiphikisana ngezansi, Ngizobe ngiwukhulisa lo mbono futhi ngikholwa ukuthi ukusetha kufanele kube "nomphathi" wezinhlamvu ophethe iqembu, abaqeqeshi, abadlali njll Omunye njengoMichael Vaughan?
2. Ukwehluleka ukuphatha abezindaba
Abezindaba abebengabi nomusa kwiNgilandi kamuva nje. Noma kunjalo, iningi lalokhu libonakala kimi lingelami eNgilandi. Njengeqembu babonakale kumhlaba wangaphandle njengokugqamile kakhulu. Njalo ukunqotshwa noma ukungasebenzi kahle kuhlangana nomuntu “sazi kangcono ukuthi singasilungisa kanjani lesi simo” esizivikela ngokungadingekile, futhi kuqinisekisiwe ukukhungathekisa ama-pundits. Ama-pundits adidekile asadinga ukugcwalisa amakholomu, abazenzayo ngokuthola ezinye izinto abangabhala ngazo, futhi lokhu kuvame ngemibandela engemihle lapho i-pundit okukhulunywa ngayo iye yaqanjwa ngamatshe yiqembu. Ucwaningo oluyisisekelo lokuziphatha kwabezindaba, kanye Psychology ngamanye, bekufanele ngabe ikwenza kube sobala ukuthi ukuxhumana okuhle nabezindaba kungaba ngumqondo omuhle - ikakhulukazi njengoba onondweba abaningi abahamba phambili kungabadlali bekhilikithi abaphambili uqobo.
3. Izinselelo zobukaputeni
Ukaputeni ngemuva kukaputeni uthatha izintambo zokuba ukaputeni, futhi kungakapheli unyaka ubona ukwehla kwabo okuphakathi. I-England inomlando omude wokuqokwa phezulu (futhi kuvulwa kaningi) amalulwane njengokaputeni, Ngubani, pho, leyo ndawo ilahlekelwa ifomu, bazibeka bona kanye neqembu ngaphansi kwengcindezi. Emdlalo wanamuhla, nezimfuno eziningi ezivela kubaxhasi, abezindaba, njll. ukusethwa kweqembu kudinga ukuvuselelwa kabusha. Ukubeka imithwalo yemfanelo esiyisisekelo somdlali akubonakali kunengqondo kimi. Ungambona ngeso lengqondo umphathi-weqembu eliseqenjini lebhola enezinga elilinganayo lemithwalo yemfanelo? Ukaputeni usuvele udinga amakhono ahlukahlukene - ikhono njengomdlali wekhilikithi, ikhono njengesazi seqhinga, kanye nekhono njengomphathi womuntu. Ukuthola imithwalo yemfanelo ekaputeni kuthanda, kungacishe kwenzeke, kuholele ekwehlisweni kwesikhathi nezinsizakusebenza abazitholayo ngemithwalo yabo yokuqala. I-ECB kufanele iqoke iMenenja yeqembu, onezinhlobo ezifanayo zemithwalo yemenenja yebhola. Lo muntu kufanele abhekane nayo yonke ingxoxo nabezindaba, ngenkathi abadlali nokaputeni bebheka kakhulu ukudlala kwangempela komdlalo.
4. Ukuphatha uhlelo lokuqeqesha
Kubukeka kimi ukuthi ubuntu obuhlukile bezidlali buchofoza kangcono ngabaqeqeshi abahlukile. Abanye (isb. Alastair Cook) angakhula umqeqeshi onobuchwepheshe futhi obucayi kakhulu (umlingiswa kaGeoff Boycott), kanti abanye (Pieterson) ngokusobala ngeke uthole okungcono kulolu hlobo lomqeqeshi. Ngakho-ke umbuzo osobala uwukuthi kungani unomqeqeshi oyedwa wokushaya. Kuthiwani ngokuba nomqeqeshi kumdlali ngamunye, noma umqeqeshi wamaqembu amaningi wabadlali. Umthelela wokuthola umqeqeshi “ofanele” uboniswa kahle ngoshintsho lwempumelelo ku-Andy Murray ngemuva kokuqala ukusebenza nomqeqeshi u-Ivan Lendl ekuqaleni kuka-2012.
5. Ukuphatha ukukhetha kwabadlali
Isimo seJoe Root ngesinye futhi esiveze nokuthi ukucabanga okungahambi kahle ekusethweni kweNgilandi kube kanjani sekwedlule isikhathi. Isinqumo sokuqala sokuletha insizwa enethalente kakhulu kwakuyisinqumo esihle. Kusukela lapho konke kudukile kancane. Root kufanele anikezwe unyaka noma ngaphezulu ukuze slot eqenjini ngaphambi kokuba ashukumiseleke ukuba opener. Ukumshukumisela ukuvula kancane ngaphambi kochungechunge lomlotha, ziqonde ekhaya zibhekene ne-Australia empofu, kwakungeyona ukugembula okunengqondo, ikakhulukazi ngohlu oluhle lwezinye izinketho ezitholakala eNgilandi ukuzivula. Noma kunjalo, ngemuva kokuthatha isinqumo sokumshiya ekujuleni abakhethayo bekufanele bazimisele ukuzibophezela ekumnikezeni ithuba elihle lokumnika isikhathi sokuthola izinyawo zakhe lapho. Esikhundleni salokho balahlekelwa yithemba futhi bamshiya phansi nge-oda lokuthumela uhlobo lwemiyalezo exubile evame ukulimaza ukuzethemba kwabadlali.
6. Ukuphathwa kwengqondo komdlali
I-England isiqala ukwakha umlando wabadlali abaye balwa ngaphansi kwengcindezi yomdlalo wanamuhla. UMarcus Trescothick wayengomunye wamalulwane wokuvula amahle kakhulu eNgilandi abake baba nawo, elahlekile kusenesikhathi eqenjini ngenxa yengcindezi. USteve Harmison "akahambanga kahle", futhi ngokusobala uJonathan Trott ubelwela isikhathi esithile. Ngizofaka noGraeme Swann kulolu hlu, njengoba eyisipina esihle kunazo zonke i-England ebinaso sonke isikhathi bengilandela umdlalo, futhi umhlalaphansi wakhe ungakabi yisikhathi. Ngandlela thile bonke laba badlali bafika lapho bezwa ukuthi kukhona okungahambi kahle, kungaba nabo noma nomdlalo wabo. Kungashiwo okufanayo ngokuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi kwalowo owayengukaputeni u-Andrew Strauss. Yize kungeyona yonke inkinga kungenzeka ukuthi ilindelwe noma ilawulwe kuze kube lapho umdlali angahlala eyingxenye yeqembu, inani labadlali baseNgilandi abahlupheka libonakala liphezulu kunamanye amaqembu aphesheya. Angiyena uchwepheshe kwezokusebenza kwengqondo, kodwa kubukeka kimi ukuthi ngaphandle kwalapho lokhu kungukuphindaphindeka okungenakubalwa kwesibalo kukhona okungahambi kahle ngokusetha kwe-England. Impendulo ingalala kochwepheshe bezengqondo abangochwepheshe, kungahle kube nobungcweti obuvela kwezinye izinhlaka zamazwe, noma kungase alale buhle zangaphambili, kepha i-ECB okungenani kufanele izame ukuthola ukuthi yini okungahambanga kahle, futhi ngizame ukufunda ukuthi ungavimba kanjani izinkinga ezifanayo ezenzeka ngokuzayo. Yize ngingesilo uchwepheshe, Ngisebenzisana njalo nentsha elahlekelwe ukuzethemba emandleni ayo 'noma elahlekelwe ngumqondo wemvelo wokufuna ukwazi, futhi kususelwa kulolu hlelo, Ngincoma ukuqala kwe-ECB ngokubheka umsebenzi kaCarol Dweck.
7. Ukuphathwa kohambo nemidlalo
Le yindawo eyodwa lapho i-England yenze kahle kakhulu eminyakeni yamuva. I-England ihole indlela yokuba nezinhlangothi ezihlukile ze-T20 ne-50-over ikhilikithi, nokusebenzisa lezi zinhlangothi ukuthuthukisa izingane ngombono wazo ongathuthuka wekhilikithi ephelele ye-Test. Kusekuningi isikhala sokuthuthuka nokho. Ukuthi savuma kanjani ukubuyela emuva emuva ku-back umlotha yinto engingasoze ngiyiqonda - Ngingabaqonda ngokuphelele abadlali abasendleleni eya e-Australia becabanga ukuthi “Angithi nje sifunga igazi nezinyembezi ukunqoba lo urn? Kungani kufanele futhi enze khona manjalo?”Kukhona futhi okuningi kakhulu 'okunye ukukhilosha okudlalayo. Uma sinenkomishi yomhlaba yeT20, Big Bash, IPL, nabanye, ingabe siyawudinga ngempela ezinye T20 umentshisi zonke tour siqhubeke? Okufanayo kuhamba ngekhilikithi engu-50. Ngithanda ukuvakashela i-Australia ebusika baseBrithani amasonto angama-7-8 - kepha ukube bengichitha uhhafu wonyaka ngaphandle komkami nezingane ngicabanga ukuthi maduze ngizoqala ukuzizwa ngikhathele, kabi, futhi ongemuhle ngomdlalo. Ukukhawulela izinkambo zangaphandle 8 isonto elikhulu, futhi ukudlala okuningi 2 uchungechunge lokuhlola kude unyaka lusazonikeza ikhilikithi eliningi futhi lisho ukuthi labo badlali abangathandi ukuba kude kangako bayohlala benokukhanya okwanele ekugcineni komhubhe ukuze bakwazi ukugxila kumdlalo wabo. Ngaphezu kwalokho - uma singadlala 2 uchungechunge away ngonyaka, singakwazi futhi ukudlala 2 uchungechunge lwasekhaya ngonyaka. Kungenzeka ngokuphelele ukudlala ikhilikithi eNgilandi kusukela ngoMeyi kuze kube uSepthemba - isikhathi esithe xaxa 8 noma ngaphezulu ukufana kokuhlola. Ukudlala izivivinyo eziningi zasekhaya ngonyaka kungaba usizo olukhulu kwizikhulu ezitshalile ngezizathu.
Sicela usithumelele imicabango yakho ngokuphendula ngezansi! Uma ungathanda ukuba ubhalise sicela usebenzise ubhalisele isixhumanisi on the imenyu at ilungelo phezulu. Ungase futhi wabelane le nabangani bakho ngokusebenzisa links social ngezansi. cheers.
23rd Februwari 2016
siyanikhumbula nonke, lokho kudala umlando..
Jon A Scaife
12th Februwari 2014
I-KP kubonakala sengathi yenziwa i-scapegoat, njengoba enza Andy Imbali. Wonke umuntu obamba iqhaza ochungechungeni lomlotha uzobe efuna 'ukwenza kahle' - ukukhombisa ukuthi angenza kangcono kunokwenza e-Australia - futhi kufanele anikezwe ithuba lokukwenza ngaphambi kokuthatha izinqumo zokukhetha ochungechungeni olulandelayo lwe-Test. Ukuthola imbangela yokwehluleka komlotha ezenzweni zabantu abathile kuyisimo sobuhlakani obukhulu futhi akusisiqalo esihle emhlanganweni omusha we-ECB. Uma ngabe i-KP noma omunye umuntu etholwe enecala lokuziphatha okungathí sina ukutshonqa kungaba yimpendulo efanele kodwa lokhu akupakanyisiwe. Ngakho-ke ziyini izizathu zokususwa kwakhe? Ngokusobala inkinga ukuthi ungumuntu othanda kakhulu i-ethic ethic yethimba yamanje. Kube obungenza, ke, bebengenandawo eqenjini lamanje leBoycott, Lillee, Gayle noma Warne. Botham kungenzeka wakwenza noma. Basebenzisa ukuqonda oku-inverted. Ukuziphatha kweqembu kufanele kwamukele futhi kuhlakulele izimfanelo zabantu abahlukahlukene ukuze kusizakale bonke.
Trent Ibhuloho - Ukuvivinywa phansi Umhlahlandlela (869 ukubukwa)In the yokuqala ochungechungeni oluhlelelwe "khaphi kuze ngezizathu" thina isici Trent Ibhuloho imininingwane kusakhiwo bomhlaba futhi izindawo ezingcono ahlale Ukuze uqale nge, nansi isithombe ...
I Bowler sika Holding ... innuendo kusaqhubeka (42 ukubukwa)Cishe zonke fan cricket ayobe ewazwile lesisho edumile, kukhonjwe Brian Johnston, "Holding The Bowler sika, the Batsman sika Willey". Kungakhathaliseki noma cha lokhu ngempela kwakuthiwa bukhoma emoyeni engasekho okubalulekile omkhulu ...
Halala Bangladesh njengoba eNgilandi Spin to Hlula (37 ukubukwa)Halala Bangladesh esivivinyweni win lokuqala phansi eNgilandi. Ukunqoba kwakumfanele ngokuphelele futhi uchungechunge bebengaba kangaka siphelile kalula 2-0 kuya Sebawoti kunokuba lo 1-1 ukudweba. Yomibili imidlalo ibihamba phambili ...
Can red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi? (28 ukubukwa)Noma kukhathaza nje ukukhononda ngazibonela ngokwami ​​mayelana ekupheleni play (ngenxa yokuthi bese kumnyama) izolo ebusuku, Kwafika umcabango engqondweni kimi - nge ibhola elibomvu futhi pitch green, kungaba red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi ...
Trent Ibhuloho - Ukuvivinywa phansi Umhlahlandlela (45.1k ukubukwa)In the yokuqala ochungechungeni oluhlelelwe "khaphi kuze ngezizathu" thina isici Trent Ibhuloho imininingwane kusakhiwo bomhlaba futhi izindawo ezingcono ahlale Ukuze uqale nge, nansi isithombe ...
I Bowler sika Holding ... innuendo kusaqhubeka (19.3k ukubukwa)Cishe zonke fan cricket ayobe ewazwile lesisho edumile, kukhonjwe Brian Johnston, "Holding The Bowler sika, the Batsman sika Willey". Kungakhathaliseki noma cha lokhu ngempela kwakuthiwa bukhoma emoyeni engasekho okubalulekile omkhulu ...
Can red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi? (8.3k ukubukwa)Noma kukhathaza nje ukukhononda ngazibonela ngokwami ​​mayelana ekupheleni play (ngenxa yokuthi bese kumnyama) izolo ebusuku, Kwafika umcabango engqondweni kimi - nge ibhola elibomvu futhi pitch green, kungaba red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi ...
Bonke entsha England, ngaphandle KP (5.6k ukubukwa)In the cricket izindaba enkulu usuku England isimemezele Kevin Pieterson ngeke kusaba amacebo abo, ngempumelelo ukuxoshwa batsman zabo eliphambili. Ekugcineni Lokhu sivukile angibhalele sihloko yami yokuqala ...
Imininingwane © 2003-2022, Jon P Scaife & adore Cricket